Qiso Cajiib Leh oo dhex martay Alle iyo addoon cibaado badnaa (Qiso faa’iido leh)‏ | Markacadey.net Facebook
Warka oo Video	12:25 pm » Dowladda Somaliya oo ka qeyb galeysa shirka 13-aad ee Doha 11:31 am » Amina Mohamed oo maanta lagu dhaariyay Kutubka Diinta Masiixiga 11:18 am » Al Shabaab oo sheegtay in Ciidan xoogan uu laba jiho kaga soo wajahan yahay Degmada Baardheere 11:06 am » Ciidamada Nabad Suggida oo jawaab culus ka bixiyay madaafiicdii xalay lagu weeraray Madaxtooyada 9:08 am » Xildhibaanada Baarlamaanka Somaliya oo si kulul uga jawaabay amar ka soo baxay Madaxtooyada 9:02 am » Sheekh Xudeyfa “Waa lama huraan inuu dagaal ka qarxo Kismaayo, laakiin shacabka haddii ay soo barakacaan, waan soo dhaweyneynaa” 8:50 am » Ciidan cusub oo wata Tuuto uu ku qoran yahay Jubbaland oo maanta lagu arkay Magaalada Kismaayo 8:43 am » Madaafiic culus oo lagu weeraray Madaxtooyada Somalia, xilli Dowladda ay Maamusho Magaalada Muqdisho 8:08 pm » Fawziya Yuusuf oo ka hadashay dhawr qodobo, xilli ay ku soo laabatay Magaalada Muqdisho 10:11 am » Bananbax culus oo looga soo horjeedo Axmed Madoobe oo ruxay Magaalada Kismaayo By: Mastar // Jan 06 2012 at 1:49 pm // 3,953 Reads // Wararka Somalia Qiso Cajiib Leh oo dhex martay Alle iyo addoon cibaado badnaa (Qiso faa’iido leh)‏ Share Tweet
Jibril (calayhi-as-Salam) ayaa Nabiga (NNKH) u sheegay qiso cajiib ah. Jibril wuxuu yiri waxaa jiray nin Ilaahay (sw) caabudayay 500 oo sano oo isku xigta. Wuxuu ku noolaa buur korkeeda, buurtaasna waxaa hareereeyay bad weyn oo dhanaan ah, hase ahaatee Eebe weyne ayaa buurta korkeeda u keenay il biyo macaan ah, taas oo uu ka cabi jiray, una isticmaali jiray wayso. Waxaa sidoo kale la siin jiray miraha geedka Rumaanka ah (pomegranate) oo buurta dusheeda ka bixi jiray.
Maalin maal-maha ka mid ah ayaa isagoo duceysanaya ayaa wuxuu Ilaahay (sw) ka baryay inuu geerida u keeno isaga oo sujuudsan. Eebe weyne wuu ka aqbalay oo waxaa la oofsaday isago oo sujuudsan. Jibril (as) wuxuu yiri Maalinta Qiyaamo Ilaahay (sw) wuxuu amri Malaa’igta inay ninkaasi Jannada ku geeyaan Raxmaddiisa darteeda. Hase yeeshee ninkaasi ayaa dalban doono in Jannada lagu geeyo camalka uu shaqaystay darteed.
Kadib ayuu Ilaahay (sw) amri doonaa Malaa’igta inay is barbar dhigaan camalkiisa iyo nicmooyinkii Ilaahay (sw) ugu deeqay.
Markaas ayaa waxaa cadaan doonto in cibaadadiisii 500 oo sano ahayd aysan xataa u dhigmin nimcada isha wax lagu arko ee la siiyay. Markaas ayaa Malaa’igta la amray inay ninkaasi u ka xeeyaan dhanka naarta. aad iyo aad ayuu ninkii u qeyliyay isagoo Allaah ka dalbaday “Allow Naxariistaada igu geli Janada”.
Dabadeed hadalkaan ayaa dhex maray Allaah iyo addoonkii. Eebe Weyne: Adoonkeygiyow yaa ku abuuray?
Adoonkii: Eebe Weynow adaa i abuuray.
Eebe Weyne: Ma waxaa laguu abuuray camalkaada wanaagsan dartiisa mise Raxmadayda darteed?
Adoonkii: Raxmadaada darteed Eebe Weynow.
Eebe Weyne: Yaa ku siiyay 500 00 sano ood Ilaahay (sw) ku caabudo?
Adoonkii: Eebe Weynow adigaa ayaa awoodaas i siiyay.
Eebe Weyne: Yaa ku kor-geeyay buurtii badda ku wareegsaneyd? Yaa kuu suura galiyay in il biyo macaan ah oo soo dhex maraan baddaas oo aad ka cabto? Yaa ku siiyay geed Rumaan ah oo buurta kaaga kor baxo? Yaa ku oofsaday adiga oo sujuudsan kaana aqbalay ducadaadii?
Adoonkii: Ya Razzaq, Eebe Weynow waa adiga.
Eebe Weyne: Hadaba waxan oo dhan waxay ku dhaceen naxariistayda darteed maantana waxaad Jannada ku gali naxariistayda darteed oo kaliya.
Fiiro: Ilaahay (sw) naxariistiisa iyo galadaha uu na siiyay ayaa marwalbo ka badan wax walbo oo kale. Xaq aan ku leenahay markaan waajibaadkiisa gudannana ma jirto maadaamo inta uu na siiyay oo ka mid yihiin adimaha aan cibaadada ku gudanayno uu isaga na siiyay. Related News:
Dowladda oo baaritaano ku sameyneysa meydka nin dhalinyaro ah, oo maanta laga helay Magaalada Muqdisho Maamulka cusub ee gobolka Hiiraan oo hadal wanaagsan jeediyey iyo shacabka oo soo dhaweeyey Nin safarleey ah oo Ragga ujeediyey hadal muhiim ah markii Xaaskiisa lala isticmaali jiray muddo seddex sano ah!!! Wariye Rug cadaa ahaa oo geeriyooday iyo Taariikh kooban oo kusaabsan Wariyahaasi Askari ka tirsan Ciidamada Booliska oo askari kale ku dilay Magaalada Muqdisho oo la soo qabtay Dab khasaaro geystay oo ka kacay deegaanka Ceelasha Biyaha ee gobolka Sh/hoose Banaanbax culus oo ka soconaaya Magaalada Muqdisho Disclaimer: The comments uploaded on this site do not necessarily represent or reflect the views of management and owner of MARKACADEY.net. We reserve the right to exclude comments that we deem to be inconsistent with our editorial standards. comments